Madaxweynaha Puntland oo Maanta Garoowe dib ugusoo laabtay – Radio Daljir
Juunyo 1, 2015 8:22 b 0
Isniin, June 01, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland , kadib howlo shaqo oo muhiim ah oo uu ugu maqnaa Gobolada Bari iyo Karkaar.
Madaxweynaha iyo wefdiga uu hogaaminayey oo ka soo kictimay xili hore saaka magaalada Boosaaso ayaa waxaa ay ku soo hakadeen muddo kooban magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar oo uu madaxweyne Gaas ku dhagax dhigay dhul ay dawladu ugu talagashay qaxootiga Yemen ee ka soo cararaya dagaalada ka soconayaa dalkaas.
Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ka qeyb galay munaasibad kooban oo loo qabtay dhagax dhiga dhulkaa, waxaana uu Madaxweynuhu madasha ka sheegay in dawladda iyo shacabka reer Puntland ka go’antahay isgarabtaaga walaalahooda Yemen.
Intaa ka did ayaa madaxweynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefdigii uu hogaaminayey u soo ambabaxeen magaalada Garoowe, waxaana si weyn duleedka magaalada ugu soo dhaweeyey Wasiiro iyo masuuliyiin kale duwan.
Mudadii uu Madaxweyne Gaas ku maqnaa magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari waxaa uu booqday xarumaha dawladda , sidookalana waxaa uu isbadal ku sameeyey maamulka Gobolka iyo kan degmada Boosaaso.
Madaxda Afrika oo ka dalbaday Madaxweynaha Burundi in doorashada dib loo dhigo